micro တိုက်တေနီယမ် anode ကွက် -Weian, သတ္တု Expanded
တိုက်တေနီယမ် Expanded သတ္တု
ကျနော်တို့ High Quality ထုတ်ကုန်များဝေငှ
micro သတ္တု mesh Expanded
သွပ်ရည်စိမ်သို့မဟုတ် PVC ပလတ်စတစ် coated ဂဟေဝါယာကြိုးကွက်
welded ဝါယာကြိုး mesh, ဒါမှမဟုတ်ဝါယာကြိုးထည် welded, သို့မဟုတ် "weldmesh" လျှပ်စစ် Fusion ကိုတိကျအကွာနှင့်အတူအပြိုင် longitudinal ဝါယာကြိုးတစ်စီးရီးပါဝင်သည်ဟု prefabricated ပူးပေါင်းဇယားကွက်လိုအပ်သောအကွာမှာလက်ဝါးကပ်တိုင်ဝါယာကြိုးမှ welded welded ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစား: · Electro သို့မဟုတ်ဟော့သံမဏိဝါယာကြိုးဝါယာကြိုး mesh welded ·ပြီးနောက်သို့မဟုတ် welding မတိုင်မီအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးနှစ်ပြီးသော· PVC coated welded ဝါယာကြိုးအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး· Black ကဝါယာကြိုး mesh / အဘယ်သူမျှမကုတ်အင်္ကျီဂဟေဝါယာကြိုး BRC 3315 mesh (အထူးဂဟေဝါယာကြိုးစင်္ကာပူအဘို့အ mesh · mesh ...
လယ်ယာများအတွက်လုံခြုံရေးရိုက်ကေ့ Chain Link ကိုခြံစည်းရိုး ...
2009 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Weian ကုမ္ပဏီအသေးစား Expand သတ္တု၏အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာရန်တစ်နှစ်အပေါ်သိသိသာသာစကေးတစ်နှစ်အပေါ်လာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စျေးကွက်၏ကျယ်ပြန့်အသိပညာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုအပေါ်မှီခိုကျနော်တို့ထုတ်ကုန်များနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး, သံမဏိအတွင်းသတ္တုတိုးချဲ့တီထွင်ခဲ့ကြ, လူမီနီယမ်, ကြေးနီ, တိုက်တေနီယမ်အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး, width နဲ့ကွက်များတွင်နီကယ်။ ကျနော်တို့အနီးကပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်အပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။
သစ် coronavirus ဆန့်ကျင်အခြေခံပညာကာကွယ်ဆောင်ရွက်ချက်များ
ဗီယက်နမ်ကုန်စည်ပြပွဲ 2019 HCM စီးတီးအတွက်ဖွင့်လှစ်
အဆိုပါဗီယက်နမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ - ဗီယက်နမ်ကုန်စည်ပြပွဲ 2019 နိုင်ငံပေါင်း 20 နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအနေဖြင့်အချို့သော 800 ကုမ္ပဏီများစုဆောင်းခြင်း, ဗီယက်နမ်ရဲ့တောင်ပိုင်းဟိုချီမင်းစီးတီးရှိဒီဇင်ဘာလ 4-7 ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကိုဖန်တီးရန်ရည်မှန်း, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်လက် Tools များ 2019 အပေါ်နိုင်ငံတကာပြပွဲနှင့်အတူအရပျကိုလုယူ ...
Zhangshe စက်မှုဇုံ, Hengshui, Hebei, တရုတ်
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါနဲ့ကျနော်တို့ 24 နာရီအတွင်းအဆက်အသွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
© Copyright - 2010-2020 : All Rights Reserved. Tags: - Hot ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း